Diyaarado Dagaal Oo Duqeymo Xoolo Lagu laayay Ka Geystay Duleedka Degmada Afmadoow Ee Jubabda Hoose.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo ba'an oo diyaaradaha dagaalka Kenya ay shalay ka geysteen deegaanno katirsan gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ka imaanaya dhulka Miyiga ah ee hoos yimaad degmada Afmadoow ayaa sheegaya in diyaaradaha Miigaga ay isticmaalaan melleteriga Kenya ay duqeymo ku laayeen xoolo ubadan geel sida ay sheegeen dadka deegaanka.
tobaneeyo neef ayaa ku bakhtiyay duqeymo bahalnimo ah oo ciidanka cirka Kenya ka geysteen deegaanka Weelmaaroow,
Mid kamida dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in ugu uaraan 10 neef oo geel ah ay ku dhinteen duqeynta oo ku dhawaad muddo hal saac ah ku socotay deegaanka iyo dhulka Howdka ah.
"Xoolo ubadan geel ayaa ku dhintay duqeyn laayaan ah oo diyaaradaha gaalada ka geysteen Weelmaaroow iyo dhulka Howdka ah, balse majirin wax khasaaraha ah oo soo gaaray dadka shacabka ah" sidaas waxaa yiri qof ka badbaaday duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka Kenya.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidanka Cirka Kenya ay bartilmaameedsadeen wara biyoodyo kuyaal duleedka Afmadoow waxaana lasoo sheegayaa in xoolo badan ay ku bakhtiyeen duqeymahan cadowtooyo.
Haba yaraatee majirin wax khasaara ah oo dadka rayidka ah kasoo gaaray duqeyntan, wasaaradda G/dhigga Kenya ayaa mar walba oo ay duqeyso dhul daaqsimeed iyo wara biyood waxay ku andacootaa in ay dishay Hoggaamiyaal sarsare oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin!.
Dowladda Kenya ayaa xasuuq daran ka wadda deegaanno katirsan Gobollada Jubbooyinka Gedo halkaas oo ciidamadeedu qeyb ka yihiin soo duulayaasha AMISOM isku magacaabay kuwaasi oo lagu naafeeyay dagaalka 10 sana jirsaday ee Soomaaliya ka socda.